AVCHD waa horumar ay si wadajir ah oo ka mid ah Sony oo Panasonic Iskudarka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka dhisme file tahay in la hubiyo in videos waa qeexid mar walba sare u samayso iyo natiijada ugu fiican in dadka isticmaala ay u hesho marka la ciyaaray.
Sharax qaabka AVCHD file sanamyadooda
Ugu fudud iyo gobolka image tahay in lagusoo bandhigi karo qaab AVCHD waa sida soo socota iyo sharaxaad ayaa sidoo kale ayaa la sameyn doonaa hab ugu fiican si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan:
Geedi socodka la xiriira sidoo kale in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo gobolka of technology tahay waxaa ku riyaaqay arrintan la xiriira sida faylasha AVCHD ee la soo saaray si loo hubiyo in mts iyo m2ts qaabab yihiin si buuxda loo isticmaalay iyo waxa sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qaabka ugu wanaagsan ee la doorto ee soo bandhigeen natiijada ugu wanaagsan sameeyaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab-dhismeedka file wuxuu noqon karaa mid adag haddii user ee aan waa ogyahay muuqaalka guud iyo magaca file AVCHD sida uu hubiyo in qaab-dhismeedka galka marna la fahamsan by user ee arrintan la xiriira ka dhigi doonaa.
Ma suurogalbaa in dib-u-dhisto file-dhismeedka card AVCHD ku maqan yahay kaarka si Doqon Log & Suuqa galay waxay akhriska?
Dhismaha file .mts ayaa file AVCHD ka dibna kor ku xusan oo ay tahay qayb ka mid ah geeyo faylka halkaas oo faylka AVCHD dhabta ku yaal. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in abuse waxaa ku sirmin gelinayn iyo marin-habaabinayaan faylasha .mts sidii loo bedeli doonaan meeleynta oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Laakiin waxaa been arrin noocan oo kale ah la sameeyo sababo la xiriira oo suurta gal ma aha. Dib u dhiska ee file AVCHD suurtogal ma aha in dhammaan ay qaab-dhismeedka file AVCHD aan loo soo gudbin ama folder ku salaysan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in qaab isagoo files iyo qaab-dhismeedka galka la bedeli karaa oo dhiso, oo waxaa suuragal ah keliya in warbaahinta tapeless. Qaab AVCHD ma aha mid ka mid ah in la taabtay.
Qaab-dhismeedka file AVCHD maqan files / fayl?
Sidoo kale waa mid ka mid ah khaladaadka caadi ah in arrintan la xiriira iyo user waa in la hubiyo in software Recuva waxaa soo bixi website ka dhigi http://www.piriform.com/recuva/download/portable in arrinta la xaliyo sida ay tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la hubiyo in user marnaba wajihi arrin kasta oo arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ugu fiican waxaa had iyo jeer la siiyaa user ee arrintan la xiriira. Marka barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in file AVCHD ee xasuusta ku jiraan dhammaan faylasha sida waxaa la marsiiyey si aad u hesho natiijooyinka iyo files maqan.
Sidee ay u arkaan qaab-dhismeedka galka AVCHD on Mac
Si aad u aragto files ku Mac waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in doorasho ee AVCHD in ay convertor AIC waxaa loo isticmaalaa taas oo shaki laga heli karaa dhammaan barnaamijyada software Keenista ee Apple Inc. Haddii convertors ee Apple ayaa ma aaminin by user markaas waxa ay waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in gobolka xisbiga saddexaad ee convertors tahay waxaa loo isticmaalaa si aad u eegto content AVCHD gal Mac ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa jira laba convertors in ay tahay in la tixgeliyo marka ay timaado dhinaca saddexaad sida Voltaic HD u Mac iyo barnaamijka software Rooti oo la soo saaray by Roxio si aad u hesho shaqada sameeyey dadka isticmaala ee arrintan la xiriira.
Waxa ugu muhiimsan waa inuu arrintan la xiriira in la ogaadaa waa in Sony oo Panasonic ma yihiin kuwa keliya oo isticmaala qaab tan iyo hadda u Canon iyo JVC ayaa sidoo kale bilaabay isticmaalaya qaab si ay u hubiyaan in dadka isticmaala waxaa lagu cafiyo iyo ugu fiican file kordhin loo isticmaalo. Waxaa isticmaalka barnaamijka habka ugu fiican taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay wax waqti ah gudahood oo dhan iyo Raaxo Tan waxaa marna dhamaaneynin. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan sida videos iyo files audio in lagu gundhig gudahood dhismeedka waa kuwa aad u waaweyn oo cabbirka. Faa'iida kaliya la isticmaalayo AVCHD waa xaqiiqda ah in size file waa mid aad u ballaaran oo waa inuu xaqiijiyo in meel disk waaweyn ayaa waxaa kujira in arrintan la xiriira. Waxa kale oo hubin doona in ka kooban oo ka mid ah files video aan beddelmin xitaa haddii kordhin la bedelo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in ay sidoo kale ka heli doontaa aqoonta ku saabsan OS kala duwan sida Windows iyo Mac sida kuwan waa kuwa in la beddelo dheeraad ah ee .m2ts in mts iyo qeybsanaan ku xigeenka.
> Resource > Beddelaan > In la fahmo qaab-dhismeedka file AVCHD ah